Inta lagu jiro Covid-19, Dakhliga Q1 2020 ee Amazon wuxuu xaqiijinayaa awooda ganacsiga ecommerce | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Dhexda Covid-19, Dakhliga Q1 2020 ee Amazon wuxuu xaqiijinayaa awoodda ganacsiga ecommerce
Dhexda Covid-19, Dakhliga Q1 2020 ee Amazon wuxuu xaqiijinayaa awoodda ganacsiga ecommerce
Abriil 30, Amazon waxay ku dhawaaqday natiijooyinkeeda rubuci-koowaad ee 2020. Sidii la filayey, wadarta dakhliga saddexda bilood dhammaaday ee Maarso 31 ayaa ahaa mid aad u xooggan - qiyaastii $33 milyan oo iib ah saacaddii.
Dakhliga ayaa kordhay, laakiin dakhliga saafiga ah ayaa hoos u dhacay sanadba sanadka ka dambeeya, iyada oo shirkaddu ay hoos u dhacaas u sababaysay korodhka kharashyada wax-soo-saarka iyo kor u kaca kharashaadka dhoofinta. Kharashaadka dhamaystirka ayaa kor u kacay in ka badan 34 boqolkiiba sanad gudihii ilaa $11.5 bilyan, iyo kharashka iibku wuxuu kordhay 30.5 boqolkiiba ilaa $44.3 bilyan.
Iibka saafiga ah ee Amazon ee $75.5 bilyan ayaa kor u kacay 26 boqolkiiba rubuci hore ee sannadkii hore, laakiin dakhliga saafiga ah ee hawlgalka ayaa hoos u dhacay 10 boqolkiiba - $4 bilyan vs. $4.4 bilyan isla rubucii 2019. Dakhliga saafiga ah (dakhliga hawlgalka oo ka yar kharashyada aan shaqaynayn , sida dulsaarka iyo cashuuraha) ayaa si qoto dheer hoos ugu dhacay, hoos 29 boqolkiiba ilaa $2.5 bilyan marka loo eego $3.6 bilyan isla muddadaas sannadkii hore.
Iibka Waqooyiga Ameerika wuxuu kordhay 29 boqolkiiba ilaa $ 46.1 bilyan; Dakhliga hawlgelinta ayaa hoos u dhacay 43 boqolkiiba sannad kasta. Iibka caalamiga ah ayaa kordhay 18 boqolkiiba, laakiin qaybta waxaa soo gaadhay khasaare hawleed oo dhan $398 milyan. Amazon waxay la kulantay khasaare hawleed qaybtan shantii rubuc ee la soo dhaafay.
Amazon ayaa soo jiidatay dareenka dowladda Mareykanka, oo ku eedeysay Amazon inay si bareer ah u iibiso alaabada been abuurka ah, isla markaana ay tahay mid kaligeed ku shaqeysata. Bishii Maarso iyo Abriil 2020, dacwado badan oo ficil-faseed ah ayaa laga gudbiyay Mareykanka iyo Kanada oo ka dhan ah Amazon. Dacwooyinku waxay ku andacoonayaan habayn qiimo-is-beddel ah oo u dhexeeya Amazon iyo iibiyeyaasha qolo saddexaad iyo sidoo kale isku dayga dhabta ah iyo isku dayga kali-taliska ah ee suuqa tafaariiqda ee khadka tooska ah ama suuq-hoosaadyada.
Iyadoo shirkadaha intooda badan ay shaqada ka joojiyeen, Amazon waxay ahayd mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee shaqada. Bilihii Maarj iyo Abriil waxa ay shaqaalaysay 175,000 oo shaqaale ah oo waqti-buuxa ah iyo kuwo wakhti-dhiman ah si ay ula socdaan amarada. Inta badan kuwan waa boosaska bakhaarrada. Amazon waxay siinaysaa mid ka mid ah dhowr ilo dakhli oo kale oo loogu talagalay kuwa laga eryay shaqooyin kale. Shaqaalaysiintan ayaa laga yaabaa inay cadhaysiiso qaar ka mid ah xayaysiinta taban.
… Amazon waxay ahayd mid ka mid ah meelaha yar ee ifaya marka la eego xagga shaqada.
Seddex meelood Labaad
Warbixinteedii Maarso 31 10Q ee Guddiga Amniga iyo Sarrifka ee Mareykanka, Amazon waxay tiri:
Waxaan filaynaa in ay saameyn ku yeelato daahitaanka wax iibsiga iyo rarida, kala go'a silsilada saadka, baahida badeecada sare ee qaybaha qaarkood, hoos u dhaca baahida badeecada ee qaybaha kale, awoodayada aan ku ururinayno xisaabaadka, iyo korodhka kharashyada buuxinta iyo qiimaha iibka boqolkiiba iibka saafiga ah ilaa ugu yaraan Q2 2020…
Bishii Abriil 30-keedii wacitaanka shirka, maamulaha guud Jeff Bezos wuxuu ka digay, "Haddii aad tahay mulkiilaha Amazon, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad fadhiiso, sababtoo ah kuma fikirno wax yar. Xaaladaha caadiga ah, Q2-kan soo socda, waxaanu filaynaa inaanu samayno qaar ka mid ah $4 bilyan ama ka badan oo faa'iido hawleed ah. Laakiin kuwani maaha xaalado caadi ah. Taa beddelkeeda, waxaan fileynaa inaan ku bixinno dhammaan $4 bilyan, iyo laga yaabee in xoogaa ka badan, kharashaadka la xiriira Covid-ka ee helitaanka alaabada macaamiisha iyo ilaalinta shaqaalaha.
Bezos wuxuu sheegay in shirkaddu ay qorsheyneyso inay maalgashi ku sameyso adeegyo kala duwan, oo ay ku jiraan "qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, nadiifinta xarumahayaga, dariiqyada habka waxtarka yar ee u oggolaanaya fogeynta bulshada ee waxtarka leh, mushaharka sare ee kooxaha saacadaha, iyo boqolaal milyan si ay u horumariyaan our awoodaha tijaabada ah ee Covid-19." Dalka Maraykanka, shaqaalaha badankoodu waxa ay heleen mushahar kordhin saacadii ah $2. Shaqaalaha Yurub waxay helayaan mushaar kordhin badan.
Kharashyadaasi waxay gacan ka geysan karaan luminta hawlgalka illaa $1.5 bilyan rubuci labaad, sida uu qabo hagidda Amazon.
Inkasta oo ay ballanqaaday in ay ilaalinayso shaqaalaha, Amazon waxay siinaysaa calaamado isku dhafan. Maajo 1, shirkaddu waxay soo afjartay siyaasaddeeda fasax aan lacag la'aan ah oo aan xadidnayn. Shaqaalaha bakhaarka ee Maraykanka iyo Yurub oo dhan ayaa sameeyay socod-bax, iyaga oo sheeganaya in shirkadu aysan bixin ilaalin shaqaale ku filan. Amazon, oo leh mawqif aan fiicneyn oo ka soo horjeeda midowga, ayaa shaqada ka ceyrisay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha socodka.
Xitaa ka hor faafitaanka Covid-19, eMarketer wuxuu saadaaliyay in iibka ecommerce ee Amazon ee 2020 uu kici doono 17.2 boqolkiiba ilaa $261 bilyan - boqolkiiba afar dhibcood ayaa ka sarreeya heerka kobaca guud ee iibinta ecommerce ee Mareykanka. Natiijo ahaan, eMarketer wuxuu saadaaliyay in saamiga suuqa Amazon uu ka kordho 37.3 boqolkiiba 2019 ilaa 38.7 boqolkiiba 2020.
Xiritaanka masiibada ee la xiriirta dukaamada leben-iyo-hoobiye iyo suurtagalnimada in qaarkood aysan dib u furi doonin, Amazon waxay qaadan doontaa wax badan oo ka mid ah tafaariiqda tafaariiqda. Marka la soo koobo, Amazon waxay si fiican ugu taagan tahay inay ka soo baxdo heerka ugu sarreeya ee masiibada Covid-19, xitaa haddii ay la kulanto khasaare hawleed muddada gaaban.
Cusboonaysiinta xudunta u ah Google ee May 2020 waxay ahayd mid weyn oo ballaadhan, aaladaha xogta raadinta ayaa muujinaya